Magaalooyinka gobolka Hiiraan ee Al-Shabaab cunaqabateeyeen oo la geeyay ciidamo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MAREEG	 On Mar 20, 2015
Wararka naga soo gaaraya magaalada B/Weyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamo fara badan oo isugu jira Dowladda Federaalka iyo ciidamada AMISOM ay saakay ka baxeen xeryaha ay ku leeyihiin magaaladaasi, kuwaasi oo ku sii jeeda degmooyinka B/Burte iyo Jalalaqsi.
Kolonyo ka tirsan ciidamada isbaheysiga oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa saakay u ruqaansaday magaalada Jalalaqsi, iyagoona fariisimo ka sameysanaya tuulooyinka Booco iyo Halgan, halkaasi oo dagaalyahanada Al-Shabaab ay dhowr goor ku gubeen gawaari raashin u siday degmadaasi.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM inay gaareen degaano ka tirsan degmada Buulo Burte, isla markaana fariisimooyin dhowr ah ka sameystay wadada dheer ee isku xirta B/weyne iyo B/Burte.
Dhinaca kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda war cad ka soo saaro howlgalada ay sameynayaan ciidamada huwanta ah, inkasta oo uu horay u sheegay in ciidamada dowladda Federaalka oo kaashanaya kuwa AMISOM ay awood buuxda u leeyihiin inay degmooyinka ay Shabaabku cunaqabateynta saareen ka qaadaan.
Muddo hal sano ah ayaa laga joogaa markii gobolka Hiiraan laga saaray Al-Shabaab oo iyana cuna qabateyn saartay degmooyin ka tirsan gobolka oo sababtay inay barakacaan qoysaskii degenaa, halka qoyska ku haray ay harraad iyo gaajo la il daran yihiin.